एभीसी सेन्ट्रल जोनः नेपालकाे तयारी अन्तिम चरणमा, विपक्षी टिमहरू कस्ता ? | | Neplays.com
एभीसी सेन्ट्रल जोनः नेपालकाे तयारी अन्तिम चरणमा, विपक्षी टिमहरू कस्ता ?
काठमाडौं, २५ साउन । भदौ २ गतेदेखि ८ गतेसम्म काठमाडौंमा हुन लागएको एभीसी सेन्ट्रल जोन मेन्स भलिबल प्रतियोगिताका लािग सबै टिमले तयारी तिब्र पारेका छन् । घरेलु टिम नेपालले विदेशी प्रशिक्षक ल्याएर प्रशिक्षण गरिरहेको छ । नेपालमै हुन लागेको यस प्रतियोगितामा नेपालले घरेलु मैदान र दर्शकको साथ पाएर विगतको भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गत संस्करणमा तेस्रो भएको नेपाल यस पटक पहिलो हुने लक्ष्य लिएको छ । नेपालले अहिले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका टिमहरु मध्ये कीर्गिस्तानसँग मात्रै खेल्न पाएको छैन् । १८ औं एशियन गेममा कीर्गिस्तानले नेपाललाई वाक ओभर दिएको थियो । जसका कारण यी दुई टिमको प्रतियोगितामा भेट हुन नपाएको हो ।
आसन्न प्रतियोगिताका लागि सबैभन्दा बलियो टिमका रुपमा तुर्किमिनस्तान रहेको छ । गत संस्करणको पनि च्याम्पियन रहेकाले पहिलो लक्ष्य भनेको तुर्किमिनस्तानको उपाधि रक्षा गर्ने हुने छ । नेपालले तुर्किमिनस्तानसँग अहिलेसम्म ३ सेट भलिबल खेलेको छ । जसमा नेपालले कडा टक्कर दिएको थियो ।
यसअघिको संस्करणमा नेपाल तुर्किमिनस्तानसँग २५–२०, २५–१८ र २५–२२ को सेटमा पराजित भएको थियो ।
नेपालले सेन्ट्रल जोनमा सहभागि हुन लागेका सबै टिमहरु राम्रो भएकाले कस्ले जित्छ भन्न सकिने अवस्था नरहेको नेपाली टिममा सहायक प्रशिक्षक जगदीश भट्टले बताए । उनले भने ‘नेपाल, अफगानिस्तान, बंगलादेश उज्वेकिस्तान एउटै क्याटेगोरीका टिम हुन् । यीनमा थोरै मात्र तलमाथि होला ।’
प्रतियोगिताका लागि सबै टिमले तयारी तिब्र पारेका छन् । अफगानिस्तान र नेपालले प्रतियोगिता अगाडी अभ्यास खेल पनि खेल्ने छन् । त्यसका लागि मंगलबार अफागनिस्तानको टिम नेपाल आउँदै छ । अफगानिस्तान टिमका खेलाडीहरु अधिकांश अमेरिकामा बस्ने भएकाले उनीहरुको स्तर पनि राम्रो रहेको बताइएको छ । यस्तै सेन्ट्रल जोनका लागि बंगलादेशले ईरानमा तयारी गरिरहेको छ । त्यसैगरी तुर्किमिनिस्तानले आफ्नो नजिकमा घरेलु लिग खेलिरहेको छ ।